Home › छलफलको विषय › मझेरीकै बारेमा
केबी ज्यू, मझेरीमा स्वागत
kbs — Mon, 11/29/2010 - 15:26
रचना राख्न, आफैं पनि सक्नुहुन्छ - लगअन गरेर देब्रेपट्टि "लेख्नुहोस्" भित्रको लिंकबाट रचना पोस्ट गर्ने पृष्ठमा जान सक्नुहुन्छ । अथवा, [email protected] मा पठाउनुहोस्, सम्पादकले प्रकाशित गर्नेछ।
riwaj ghimire — Sat, 12/08/2012 - 19:18
Very good site I'm being very
Tikaram pant — Wed, 12/08/2010 - 11:27
Very good site I'm being very happy- Every poem are nice.
धन्येबाद! हजुरहरुको सहयोगले
ठिस_बुढा (not verified) — Wed, 12/08/2010 - 15:39
kbs — Wed, 02/23/2011 - 16:30
baburam — Mon, 01/03/2011 - 18:50
baburam — Mon, 01/03/2011 - 18:56
-------नजाऊ है प्रदेश ----------------------
हुदो रहेनछ ,बरु बेदेश को आदा कमाऔ...
अतिथि (not verified) — Tue, 01/11/2011 - 05:53
hi bro very nice ....................
subash koirala (not verified) — Mon, 01/17/2011 - 12:47
subash koirala (not verified) — Mon, 01/17/2011 - 13:08
subash koirala (not verified) — Wed, 02/23/2011 - 15:40
Ram 'Udas' Rai (not verified) — Tue, 03/08/2011 - 11:27
Ram 'Udas' Rai (not verified) — Tue, 03/08/2011 - 11:33
subash koirala (not verified) — Mon, 03/14/2011 - 14:08
pramod rijal (not verified) — Tue, 04/12/2011 - 13:32
अतिथि (not verified) — Sun, 04/24/2011 - 10:42
टीका खरेल (not verified) — Sun, 07/10/2011 - 23:17
अब ऊ महिना दिनको लागि नेपाल फर्किने भई । नेपाल र्फकनु पर्दा उसमा एक प्रकारको खुशि तरङ्गति हुन्छ तर मनमा कताकता डर पनि लागिरहेछ । कहिँ कतै घरमा नराम्रो घटना त घटेन ? भन्ने डरले बेलाबेला ऊ झोक्राउँछे अनि मुटु दह्रो बनाएर जुरुक्क उठी २ दिन पछिको यात्राको लागि तयार हुन थाल्छे । के के सामान लाने होला - बहिनीहरुले दिदीले के के न ल्याइदिएकी होली भनेर आश गरेर बसेका होलान् । अनि आमालाई के लगिदिउँ भनी ऊ सोच्छे । हैन काठमाण्डुबाटनै किनेर लग्नुपर्ला भन्दै एटेचीमा उसको लुगाफाटा मिलाउन थाल्छे । उसको प्लेन चढ्ने बेला आयो । प्लेन भित्र पसेपछि ऊ आफ्नो सानो ब्यागबाट एल्बम पल्टाएर हेर्न थाल्छे । जसमा उसको बच्चा बेलाको फोटोहरु राखिएको हुन्छ । फोटो पल्टाउँदै जाँदा उसले आफ्नो बाबाको फोटो पनि देख्छे । त्यो फोटोमा उसको बाबाले उसलाई बोकेको अनि माहिली बहिनीलाई आमाले । ओहो मेरो बाबा अहिले कहाँ हुनुहुन्छ होला ? कत्ति मायाले च्याप्नुभएको मलाई ! अहिले भैदिएको भए म पढेर इञ्जिनिएर भएकोमा कत्ति दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो होला ? उसका आँखाभरी अतितका घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै नाच्नथाल्छन् । खासमा उनीहरुको पूर्ख्यौली घर पूर्वी नेपालको पाँचथर जिल्लाको भारपा गा.बि.स.मा थियो जहाँ उसले वाल्यकाल विताएकी थिई । कस्तो रमाइलो थियो । उसको जन्मथलो । कलकल बग्ने पानीका खोल्सा-खोल्सी , तालमा ताल मिलाउँदै अप्सरा झैं नाच्दै बग्ने झरनाहरु , चराचुरुङ्गीहरुको मधुर कलरव , जताततै हरिया थुम्काथुम्की अहो ! स्मरणलेनै पनि मन त्यसै त्यसै फुरुङ्ग हुने । नाचुँनाचुँ लाग्ने उसको जन्मथलोको शब्दले वर्णन गरी साध्य छैन । देवताहरुले मान्छेका लागि बनाएको अर्कै र्स्वर्गलोक पो हो कि जस्तो । पढ्नलाई पनि विद्यालयको सुबिधा त्यही विद्यालयमा प्रधानाध्यापक उसको बाबु । कस्ती चञ्चल थिइ ऊ , बिहानी पखको बतासझैं । भुवादार कपासको खेलौनाझैं समाउँ-समाउँ लाग्ने सरस्वतीको आसन श्वेत कमलझैं स्वच्छ सुन्दर यस्ती छोरी हुँदाहुँदै पनि उसको बाबुले छोराप्रतिको परम्परागत सोचाइका कारण पाँच-पाँचजना छोरीहरु जन्माउन बाध्य बनाएको थियो उसकी आमालाई । अन्त्यमा छोरा नभएपछि अर्की बिहे गरी आजसम्म नापत्ता छ उसको बाबु । हो यही कुराले गर्दा बारम्बार ठुङ्गीरहन्छ सहनशीलालाई , किनकी उसको बाबाले छोरीलाई सन्ताननै ठानेन । यस्तो र्स्वर्गभन्दा रमणीय ठाउँ छोडेर उनीहरु पनि अरु आफन्तहरुकै पछि लागेर झापाको तल्लो भागमा बसाइ सरी आजभन्दा १३ वर्षघि आएका थिए । जुन ठाउँमा सरेपनि उसको वाल मस्तिष्कमा पितृसत्तात्मक समाजले रोपेको छोरीप्रतिको नकारात्मक सोचाइको बिउ झन-झन झाँगिदै गयो । त्यसैले ऊ छोरीले पनि समाजमा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन् भन्ने नमूना बन्न चाहन्छे । ऊ सरकारी बिद्यालयबाटनै विशिष्ट श्रेणीमा एस.एल.सी. पास गरी एक कुशल इञ्जिनियर बन्छे । तर पनि आफ्नो देशमा भनेजस्तो काम नपाएपछि विदेशिएको हो । यो उसको रहर नभै बाध्यता हो । किनकी उसले बहिनीहरुलाई शिक्षित बनाएर आमाको मुहार हँसाउनु छ । उसको पढाइ पूरागर्नलाई उसकी आमाले जमिन बेच्नु परेको थियो । जमिन बेचेरै भएपनि उसलाई उसकी आमाले उसको रोजाइको बिषय पढाएकी थिइन् । म पढेपछि बहिनीहरुलाई पढाउने अनि आमालाई पाल्ने जिम्मा मेरो हो भनेर बेलाबेलामा ऊ आमालाई अभावमा पोलेको घाउमा मलम लगाइ दिन्थी । उसको यस्तो कुराले आमाको निस्तेज अनुहारमा अलिकति भएपनि कान्ति सलबलाउँथ्यो । आमा पनि आशाको मधुर मुस्कान र्छर्दै भन्थिन् " छोरी ! हेर कसो गरेर हुन्छ यो अलिकति बचेको जमिनलाई दुष्टहरुको पञ्जाबाट मुक्त गर्नुपर्छ है ? दिनदिनै सीमाना मिचेर हाम्रो जमिन हडप्न लागिसके यी राक्षशहरुले । यिनीहरुबाट आफ्नो स्वाभिमान र अस्तित्व बचाउन गाह्रो भइसक्यो । चाँडै हामीपनि सम्पन्न भएर यिनीहरुको कठोर दृष्टिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ है ? " त्यसैले गर्दा आज ऊ विदेशिएको हो । मूख्य कुरो त उसले समाजको पितृसत्तात्मक सोचाइलाई परिवर्तन गरी छोरी पनि छोराभन्दा कम छैनन् भन्ने देखाउनु छ उसलाई । अनि आमाको सपना साकार पार्नु छ । यस्तै-यस्तै बाध्यताले ऊ विदेशीएकी हो ।
जब एयरहोस्टेजले अब हामी चाँडैँनै त्रिभूवन विमानस्थल काठमाडौं अवतरण गर्न लागिरहेछौं भनी कराएको सुन्छे अनि मात्र ऊ आफ्नो अतीतमा बगिरहेको सोचाइबाट ब्यूँझन्छे । ए नेपालपो आइपुगिसकिएछ । तन्याकतुनुक लुगा मिलाउँछे । अनि बिमानबाट ओर्लन्छे । अब गाउँ र्फकने कसरी ? बसमा जाउँ भने ढीलो हुन्छ । प्लेनबाटै जाने निधो गरी टिकट मिलाउँछे । भोलि बिहान ६ बजेको बुद्ध एयरबाट ऊ भद्रपुर जाँदैछे । त्यसैले यसो अलिअलि किनमेल पनि गर्छे आमा र बहिनीहरुको लागि भनेर । उसले आमालाई रातो सारी , चोली , पछ्यौरा सबै रातै किनिदिन्छे । अनि बहिनीहरुको लागि भनेर उसले टिर्सट , पाइन्ट किनिदिन्छे । सबै सामान मिलाएर बेलुकी सुत्ने ठाउँको बन्दोबस्तको लागि लजमा गएर हल्का खाना र एक रातको सुत्ने ब्यबस्था मिलाउँछे । भोलिपल्ट बिहान उठेर एयरपोर्ट पुग्दा प्लेन छुट्नै लागेको हुन्छ । प्लेनबाट उसले सेतै हिउँले ढाकिएका हिमाल , भीरपाखा अनि तराइका साना साना घरहरु हेर्दै ४५ मिनेटमै भद्रपुर बिमानस्थल आइपुग्छे । अब उसलाई गाउँ जानुपर्ने बसमा चढ्नुपर्छ । त्यहाँबाट ३ घण्टाको बसको यात्रापछि ऊ गाउँ पुग्छे । ओहो ! कत्ति धेरै पानी परेछ । सबै सडकहरु पनि खोला जस्तै डामाडोल छ । पानी अझै रोकिएको छैन । झन् गाउँमा त खोला बढेर के गति भएको होला भन्दै बस स्टपमा पुग्छे । बस स्टपमा पुगेर ऊ बिर्तामोड जाने बसमा चढ्छे । उसको दिमाग त अहिले त्यसै त्यसै फुरुङ्ग भैराछ । अब त आमा बहिनी र साथीभाइ सबैलाई दुइ अढाइ घण्टापछि भेट्छु । अँ साँच्ची आमाले आज के को सब्जी पकाउनु भएको होला ? आमाले जे पकाए पनि कत्ति मीठो हुन्छ । आमाले पकाएको खाना सम्झेर उसको मुख रसाउँछ । घरमा आफू नेपाल फर्केको अझसम्म थाहानै छैन । एकपल्ट फेरि फोन लगाई हेर्नु पर्‍यो । फोन लागि पो हाल्छ कि ? म विर्तामोड आइपुगेँ भन्नलाई फोन गर्न खोज्छे । कति खुशि हुँदा हुन् मलाई देखेपछि बहिनीहरु । दिदी मलाई के ल्याइदिनुभयो भनेर ब्याग खोतल्न आउँदा होलान् । आमाले त आफ्नो मायालु अङ्गालोमा कसेर म्वाइ खानुहुन्छ होला । छोरी भैगो अब जानु पदैन मलाई छोडेर विदेश भन्दै हर्षका आँसु मेरो गालामा तपतप चुहाउँदै मेरो कपाल सुम्सुम्याउनु हुन्छ होला । मैले ल्याएको रातो सारी चोली लगाई रातो पछ्यौरी ओढ्दा मेरी आमा आज दुलहीझैं देखिनु हुन्छ होला । कति खुशि हुनुहुन्छ होला । साँच्चै भन्ने हो भने आमाले आजसम्म गतिलो लुगा लगाउन पाउनुनै भएको छैन । मैले ल्याइदिएको लुगा लगाएर भोलि मज्जाले फोटो खिचिन्छ अनि साथीभाइसँग भेटघाट गरिन्छ । आहा ! क्या रमाइलो क्षण होला त्यो । उसको फोननै लाग्दैन । अनि ऊ चेतनाथदाइलाई पनि फोन गर्दछे । चेतनाथदाइलाई चाहिँ फोन लाग्दछ । दाइ म सहनशीला बिर्तामोड आइपुगेँ । घरमा फोन नलागेर हैरान भैसकेँ । दाइ किन फोन नलागेको ? यत्ति भनेपछि चेतनाथदाइले तमतमाइलो स्वर निकालेर पख म तिमीलाई लिन आउँछु तिमी अहिले कहाँ छौ भन्छ । ऊ भन्छे म बसस्टपमै हो । आधाघण्टा पर्खन्दा पनि चेतनाथदाइ नआएपछि ऊ बस चढ्छे । बसको सिटमा बसेर चारैतिर आँखा कसैको खोजिमा दौडाउँछे , कोही चिनेजानेका मान्छे भेटी पो हाल्छ कि भनेर । ड्राइभरले बजिरहेको लोकगीतको सिडी अफ गरेर समाचार लगाउँछ । कान्तिपुबाट बिहान ८ बजेको समाचार भनिरहेको हुन्छ । समाचारमा बाढीपहिरोले ठाउँठाउँमा पुर्‍याएको क्षति र मान्छेको बिचल्ली परेको , ज्यान गुमाएको बारेमा मात्र भनिरहन्छ । उसलाई आफ्नो देशको गरीब जनता जो दैवी प्रकोपमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् , उनीहरुप्रति सहानुभूति प्रकट हुन्छ । किन यो देशका नेताहरुले आफ्नो लुछाचुँडीमा गरीब जनताप्रति चासो देखाउन नसकेका होलान् - उनीहरुले मोजमस्ती गर्ने पैसाले नदीनालालाई तटबन्धन गरी व्यवस्थित बनाइदिएको भएपनि त गरीबले ज्यान त गुमाउनुपर्ने थिएन । अनि कतिले घरबार बिहीन हुनुपर्ने त थिएन । बिचरा सुत्केरी , वालबच्चाहरु आज बाढी पहिरोमा परी भोकभोकै मरिराछन् । खोइ जनताले पाउने अधिकार गाँस , बास र कपासको व्यवस्था - शिक्षा स्वास्थ्यको कुरै छैन । यहाँ त भोको पेटले सारङ्गी रेट्नु परेको छ । आफन्तको अकालको वियोगमा छट्पटिनु परेको छ । उसका आँखामा अनायासै आँसु टलपलाउँछ । धिक्कार छ नेताहरु ! तिमीहरुलाई । शहरमुखिभै सुविधा सम्पन्न महलमा बस्दै भागबण्डाको लागि बैठक बस्दैमा बर्षौं बिताइसक्यौ । गरीब जनताको आत्माले तिमीहरुलाई सराप्नेछ , कहिल्यै तिमीहरुको भलो नहोस् भनेर । यति सोच्दासोच्दै बस गुड्न थाल्छ । चेतनाथदाइ आइपुग्छ । ऊ सहनशीलालाई देखेपछि परैदेखि निन्याउरो अनुहार लगाउँदै आउँछ । अनि उसको दुःख पोख्ने साथी भेटेझैं घोप्टो परेर सहनशीलाको घुँडामा घोप्टिएर डाँको छोड्छ । के भयो दाइ - किन यसरी रुनु भएको भन्दै सम्झाउँछे । उसको सम्झाइले त झन कोकोहोलो गर्छ । सहनशीला ! हाम्रो गाउँ बाढीले बगायो । सबैजना........................​. भन्न नपाउँदै सहनशीला भन्छे अनि आमा बहिनीहरु कहाँ जानुभयो त ? कसको शरणमा पर्नुभाछ अहिले ? बाढीले उहाँहरुलाई पनि बगायो । आजसम्म लाश पनि भेटिएको छैन । म साथीको घर बिर्तामोड आएको भएर बचेँ भन्दै कङ्कला शब्द गरेर चेतनाथदाइ रुन्छ । यस्तो कुरा सुनेपछि सहनशीला पूरै बरफ बन्छ । उसलाई हजारौं मीटर अग्लो भीरले थिचेझैं हुन्छ । पूरै अरिङ्गालको गोलो खनिएझैं लाग्छ । उसका बिष्फारित आँखामा अश्रुसरिताले डम्म भरिएर पूरै तुवाँलाले ढाक्छ । ऊ टाउको भुइँमा बजार्छे । छाति पिटीपिटी अलापविलाप गर्न थाल्छे । हे भगवान ! मलाई सजायँनै दिनु थियो भने अरुनै सजायँ दिन किन सकेनौ ? मलाई मुटु बिनाको अनि प्राण बिनाको निर्जिव ढुङ्गो किन बनाएर मेरी प्राणप्यारी आमा र मुटुका टुक्रा मेरी बहिनीलाई चुँडेर लग्यौ ? उनीहरुलाई जहाँ लगेका छौ मलाई पनि अहिलेनै लैजाऊ । हुँ हुँ ........गर्दै दाँत किटकिटाउँछे । साँच्चिकै तिमी छौ भने मेरो पुकार सुनिदेऊ । मेरी आमा ! तिमी कहाँ छौ ? किन मलाई आज एक्ली बनाएर बहिनीलाई चाहिँ साथमा लिएर गयौ । मेरो के गल्ती थियो मैले कुन जन्मको पाप भोग्नु परेको यो ? सानै छँदा हामी छोरीलाई जिउँदै मारेर बुबाले छोराको लागि अर्कै बिहे गरेर आजसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । तिमी पनि मलाई छोडेर गयौ । अब म कसको मुख हेरेर बाँचौं ? खोइ त मलाई तिम्रो सपना पूरागर्ने समय दिएको ? म कति अभागिनी रहेछु आफ्नी आमाको कुनै इच्छालाई पूरा गर्न सकिन भन्दै बेहोश भई भुइँमा पछारिन्छे ।मान्छेहरुको भीड लाग्दै जान्छ । अनि चेतनाथदाइले उसलाई नजिकैको क्लिनिकमा पु्र्‍याएर सलाइन चढाउँछ । उसको होश आएकै छैन । पूरै शरीर नीलो छ , रगत सुकेजस्तो । उसले सपना देख्छे आमाले आएर उसका आँखाबाट झरेका आँसु पुछ्दै छोरी ! तेरी आमा भनेको त नेपाल आमा हुन् । तैँले नेपालआमाको मुहार हँसाउनु पर्छ । यहाँका सारा जनतानै तेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन् तँ किन धन्दा मान्छेस् ? मेरो आत्मा मरेको छैन । म तँ भित्रनै छु । बाहिरी आँखाले मलाई देख्न सक्दिनस् । पीर नगर छोरी ! अब उठ । अभावमा पिल्सिएका गरीब दुःखीको सहारा बनेस् छोरी ! नेपाल आमाको बाँझो कोखमा शान्तिको बिउ रोपेस् । सुख सम्बृद्धि फैलाऊ छोरी ! यसबाटनै मेरो सपना पूरा हुन्छ । नेपालआमाको सपना पूरा गर्नु भनेकोनै मेरो सपना पूरा गर्नु हो । यति भनेपछि उसकी आमा सपनाबाट हराउँदै उसको मुखभित्र पसी हराउँछिन् । ऊ ब्युँझन्छे । छेउमा चेतनाथदाइ झोक्राएर बसेको हुन्छ । ऊ जुरुक्क उठ्न खोज्छे तर सक्दिन । बेडबाटै दाइलाई सम्झाउँछे । दाइ ! पीर नगर्नुस् । अब जे हुनु भै हाल्यो अब हामी आफ्नो देशलाईनै आफ्नी आमा मानेर यहाँनै केही गर्नुपर्छ भन्दै मु्ठ्ठी कस्छे । ऊ छक्क पर्छ । कतै यो बहुलाएकी त होइन ? अचेत अवस्थामै पो छ कि ! भनेर एक टक लगाएर हेरिरहन्छ । हेरिरहन्छ । सहनशीला भने देश-प्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको गीत गुनगुनाउन थाल्छे ।
आदरणिय सम्पादक ज्यू, यसमा
चुडामनि भट्टराई (not verified) — Wed, 07/13/2011 - 21:50
अतिथि (not verified) — Tue, 08/02/2011 - 20:52
bikash ghimire (not verified) — Mon, 08/22/2011 - 17:30
हो , अहिले उनी म सँगै छिन अप्रत्याशित रुपले अनायासको आगमनले । वर्षौपछिको हाम्रो मिलनमा...म विश्वास र अविश्वासको बिचमा छु , अनिर्णयको बन्दि भएर । के उनी साच्चै फर्किएकी हुन् त ? आफैसँग अनभिज्ञता जाहेर गर्छु म तर वास्तविकता यही हो उनी अहिले मेरै साथमा छिन् । त्यही शरीर त्यही भाव अनि त्यस्तै समर्पणको मुद्रामा प्रस्तुत । म साच्चै अचम्मित छु उनी यसरी मेरो सामु उभिदा मधुर मुस्कान सहित । म केहि बोल्न सकिरहेको छैन , मन भरिका खुशीले शब्द व्यक्त गर्न दिएका छैनन् । मेरो मनमा अनेक प्रश्नहरु थिए तर चेतना शून्यमा अडिएको छ । लाग्छ मैले संसार बिर्सिए , आँखा अगाडि केवल उनी छिन् अरु केहि छैन । संसार रिक्त छ अनि मेरो मन पनि खालि छ खुशी आनन्द शिवाय ।
अघिदेखिको मेरो स्थिरावस्था र मौनतालाई भंग गर्ने प्रयासस्वरुप उनको मधुर बोली गुञ्जियो...“ किन केहि बोल्दैनौ ? अघिदेखि मौन छौ त .....”
“हो.....ई......न.....त्यस्तो केहि पनि । ”बडो मुश्किलले निस्कियो यति चार शब्द । निकै संघर्ष पश्चात निस्केका यी बोलीले मेरो स्थिर रहेको शरीर कमाउन थाल्यो । म कापिरहे.....खै किन ? कसका लागि ? थाहा भएन ।
आफुलाई केहि सहज रुपमा ल्याउदै मैले भने , “खासै केहि छैन , सानो जागिर गर्दैछु । अनि तिम्रो भन न धेरै वर्ष हरायौ कुनै खबरबिना...।”
हामीले निकैबेर एकअर्कालाई हेरिरह्यौ , टेबुलमा रहेको कफी सेलाएको पत्तो भएन अनि कतिखेरदेखि मेरो हात उनको कोमल हातको स्पर्शमा रमाईरहेको छ त्यो पनि होश भएन । मात्र म उनलाई हेरिरहे र उनी पनि आफ्नो सुन्दर नयन मेरै दृष्टिमा अड्याइरहेकी थिईन् । त्यहाबाट उठेर हामी हिड्यौ अनिश्चित पाईला लिएर , गन्तव्यविहिन यात्रामा ........मन्द गति । उनको सुकोमल हात अझै मेरो हातको प्रेममय बन्धनमा छ । न उनले सोधिन कहाँ जाने भनेर न मलाई नै यसको जवाफ थाहाँ थियो । हाम्रा पाईला चलेका थिए एकदम सुक्ष्म गतिमा । एकअर्कासँग नबोलेपनि प्रेम साटासाट भइरहेछ , यसको प्रमाण उनको मुहारमा पाए मैले । उनको मुहार तेजमय भएको छ प्रेमको ज्योतिले अनि म सजिलै पहिल्याउन सक्छु खुशीका रेखाहरु , समर्पणका भावहरु उनको मुहारभरि असीमित रुपमा । म यसै आनन्दित छु अन्तरात्मादेखि नै । हामी निरन्तर हिड्दै छौ , कहाँबाट कहाँ पुग्यौ थाहाँ छैन तर सूर्य क्षितिजपारी डुब्दै गरेको देख्दा लाग्यो हामी धेरै हिडेछौ । थकानको आभाष अलिकता पनि छैन न उनले नै अभिव्यक्त गरिन् । साझ छिप्पिदै छ र मैले नै हाम्रो चार घण्टे लामो शब्दविहिन यात्राको मौनतालाई तोड्दै भने , “यसरी नै हिडिरहने कि कतै जाने ?”
उनको काखमा एकछिन विश्राम गर्दा लाग्यो मन धेरै हल्का भयो , म क्रमश सामान्य बन्दै गए । दुवै मिलेर खाना बनायौ , खायौ । राति अबेरसम्म अतितका रमाईला क्षणहरुको कुरा ग¥यौ तर भविष्यमा के गर्ने ,सँगै रहने , बिछोडिने......जस्ता केहि पनि कुरै भएन । तर पनि लाग्यो अब हामी कहिल्यै टाढिदैनौ । समयले दिएको चुनौतिको प्रतिकार गरि हामीले समयलाई पनि पराजित गरिसक्यौ । यस्ता कुराहरु बुझ्न भाषा नचाहिदो रहेछ । एकअर्काको मुखभावबाट हामीले बुझ्यौ यावत् कुराहरु र एक अर्काप्रति सन्तुष्ट हुन शुरु ग¥यौ....दुनिया भुल्यौ...।
म सबै बिर्सेर उनीमा समाहित हुदै गए , उनलाई थकाउँदै गए......स्वयम् आफु पनि थाक्दै गए आनन्दले क्षीण हुदै । पल–पल म क्षीण हुदै गए साहसिक र संघर्षशील आनन्दको भोगाईमा । उनी पनि निस्तेज भईन्...। अवाक् , तर पूर्ण सहयोग पाए उनीबाट । भौतिक शरीरको सहयोग , प्रेममय भावनाको प्राप्ती उनी म सँग साटासाट गर्दै थिईन् ।
अनायासै म झस्किए , आँखा उघ्रियो अनि ती एकजोर नयनको दृष्टि सँगै टेबुलमा रही एकनास बजिरहेको मोबाईल फोनमा गएर अडियो । आँखा त्यही गएर अडिए तर केही देख्न नसक्ने अन्धोझै भएर । आँखा अझै स्थिर छ त्यही बज्दै गरेको मोबाईलसँगै र मानसपटल शून्य छ , रिक्त अनि विवेकशून्य । धेरैबेरको दृष्टि स्थिरतापछि शून्य रहेको मनले धेरै विचारहरुको भारी बोक्न थाल्यो । लाग्यो यो मोबाईल फोन मेरो जीवनकै सबभन्दा ठुलो शत्रु रहेछ जसले मलाई नजानिदो पाराले पराजित ग¥यो । मेरो खुशीलाई विक्षिप्त पारेर स्वयम् मलाई पनि मृतसरह बनाईदियो । उनीसँग यथार्थमा भेट नभएपनि कल्पनामा या भनौ सपनामा हाम्रो मिलन भएको थियो । मिलन आँखाको....., प्रेमको , उनी र म बिच आएको दुरीको , भावनाको , शरीरको , समीप्यताको......आनन्दको...।
तर यो शत्रुले त्यो पुरा हुन दिएन , लाग्यो यसलाई पछार्दिउ अनि जोडले पछारिदिए तर पनि रिस मरेन। मनको आगो निभेन र मेरो अर्धमृत शरीर साधारण अवस्थामा आउन सकेन । केवल म मरिरहे , पल–पल मरिरहे । यस्तो मृत्यु जसलाई म भोगिरहेको छु साथमा मेरो आंशिक चेतना पनि म सँगै छ , आत्म पनि साथै छ । हेर्दा जीवित देख्छु तर पनि म मरिसकेको आभाष म आफै गर्दैछु र आफ्नो यो अवस्थालाई मृत्युसँग परिभाषित गरि क्रमशः विचित्रको मृत्युलाई अँगाल्दै हिडिरहेछु....मृतयात्रा...।
अतिथि raju chhetri (not verified) — Sat, 08/27/2011 - 20:03
umakanta kafle 'uk udash ' (not verified) — Sat, 09/03/2011 - 13:51
abinash2000 (not verified) — Thu, 10/13/2011 - 11:45
Atit lingden — Fri, 10/28/2011 - 22:45
Atit lingden — Sat, 10/29/2011 - 05:50
-सुजन सेलिङ "लुङमाहिम साईला" (not verified) — Sat, 11/26/2011 - 14:21
-सुजन सेलिङ "लुङमाहिम साईला"
असमर्थ भएर बजएनौ,---------------
रिसाएर उस्ताइ भुनभुनियाउ,-------------
-सुजन सेलिङ "लुङमाहिम साईला" (not verified) — Sat, 11/26/2011 - 14:24
नमस्कार म सुजन सेलिङ "लुङमाहिम साईला" साउदी अरेबियाबाट मलाई यो मझेरि परिवार भित्र प्रबेस गर्ने इच्छा छ तर कसरी प्रबेस गर्ने थाहा भएन त्यसैले यही सन्देश मार्फत सोध्ने कोशीस गरेको छु कृपया बताइ दिनु हुन्थ्यो कि ?
-सुजन सेलिङ "लुङमाहिम साईला" (not verified) — Sat, 11/26/2011 - 16:47
श्रध्येय सम्पादक ज्यु , मझेरी
-सुजन सेलिङ "लुङमाहिम साईला" (not verified) — Mon, 11/28/2011 - 17:51
सुजन सेलिङ"लुङमाहिम साईला"
kbs — Mon, 11/28/2011 - 21:19
puskal — Thu, 12/08/2011 - 15:52
मेरो मुटु पिसेर अचार बनाउ //// (- - - प्रतिक) ////
puskal — Thu, 12/08/2011 - 15:55
जिन्दगीलाई ढाट्ने हरु // ३// पुस्कल पौडेल "प्रतिक "
उमेस (not verified) — Mon, 12/26/2011 - 16:36
kbs — Mon, 12/26/2011 - 20:27
उमेस (not verified) — Mon, 12/26/2011 - 16:54
जंग — Wed, 01/11/2012 - 16:25
यसमा रचना प्रकाशन गर्नु के गार्नु पर्छ होला जानकारी पाएमा हुने थिहो कि.................
जंग — Wed, 01/11/2012 - 16:28
जीवन खेर जानु 'याद' सगै लर्कि बसे
Biru Birahi (not verified) — Tue, 06/05/2012 - 10:41
अतिथि (not verified) — Fri, 08/31/2012 - 08:05
आयु लम्बाउनु हो - बधाई छ -कुमारजी र टोलीलाई
बद्री (not verified) — Fri, 08/31/2012 - 20:47
sanamgole — Sun, 10/21/2012 - 12:15
ks — Sun, 10/21/2012 - 17:24
Kabi7 — Sat, 10/27/2012 - 11:28
ks — Sat, 10/27/2012 - 11:40
Kabi7 — Tue, 11/06/2012 - 13:05
अतिथि (not verified) — Fri, 11/09/2012 - 14:38
पवन प्रतीक राई — Sun, 12/09/2012 - 03:00
आशा रोपेर नयाँ नयाँ फुलाउछु म
narayan pokharel — Sun, 12/30/2012 - 20:06
birendrakanu — Fri, 01/04/2013 - 10:25
अनिता भण्डारी (पौडेल) (not verified) — Tue, 05/07/2013 - 08:04
अरुलाई जति श्राप बोले पनि
गमलामा बलात्कृत फूल
दुनियाको त्यो भीडमा